Blockchain သတင်းများ 12 ဇန္နဝါရီလ 2018 - Blockchain သတင်းများ
ဇန္နဝါရီလ 12, 2018 admin
တရုတ် search engine ကို Baidu သည် Blockchain-as-a-service ကိုပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်
တရုတ်ကို web ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီး Baidu သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် blockchain-as-a-service ကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ် (BaaS) ပလက်ဖောင်း.
ဘိုင်ဒူကတီထွင်တဲ့နည်းပညာအပေါ် အခြေခံ., ပွင့်လင်းပလက်ဖောင်းအများဆုံးပေးထွက်သတ်မှတ် “အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသော” blockchain ဝန်ဆောင်မှု.
ကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံက်ဘ်ဆိုက်၏အဆိုအရ, “ဘိုင်ဒူ Trust မှ” အရောင်းအများ၏အပြုအမူများနှင့်သဲလွန်စခွင့်ပြု, နှင့်အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုကိစ္စများတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအပါအဝင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေတောင်းခံ, ဘဏ်ချေးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု, အာမခံစီမံခန့်ခွဲမှုဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ်, နှင့်ပိုပြီး.
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအတွင်းရေးမှူးစတီဗင် Mnuchin ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုကွီးကွပျရေးကောင်စီကြောင်းသောကြာနေ့ကဆိုပါတယ်, ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်တဲ့အစိုးရခန္ဓာကိုယ်, cryptocurrencies အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်အုပ်စုတစ်စုကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်.
Mnuchin ဝါရှင်တန်ရှိအဆိုပါစီးပွားရေးဇုန်ကလပ်မှာရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှတ်ချက်ချ, D.C. Bitcoin ၏ခေါင်းစဉ်အကြောင်းမေးခံရပြီးနောက်.
“ကျနော်တို့ကအရမ်း cryptocurrencies အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြ,” Mnuchin ကရှင်းပြခဲ့သည်, အဆိုပါ U.S အတွင်းရှိအခြားအားပြိုင်မှုနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများမှညွှန်ပြ. ဖျောနောက်ပိုင်းတွင်အစိုးရနှင့်: “ကျနော်တို့မကောင်းတဲ့လူတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ကဤငွေကြေးအသုံးမနိုင်မသေချာအောင်ချင်တယ်။”
Mnuchin ကိစ္စကိုတ U.S နေခဲ့တာကဆက်ပြောသည်. အစိုးရအဖြစ်ကောင်းစွာ G-20 တွင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်လို့.
ဗဟိုဘဏ် Fiat ငွေကြေး၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်ဆိုပါက Mnuchin ဟုမေးခဲ့သည်.
“အဆိုပါဗဟိုဘဏ်ငါသည်ဤအချက်မှာများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်စဉ်းစားကြဘူး,” Mnuchin ကပြောပါတယ်.
ရုရှားရဲ့ Sberbank blockchain ဓာတ်ခွဲခန်းကိုကြေညာ
Sberbank, ရုရှား၌အကြီးဆုံးဘဏ်များ၏တဦးတည်း, တစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ blockchain ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စမ်းသပ် blockchain-based ဖြေရှင်းချက်ကြေညာလိုက်ပါတယ်.
အသစ်ဓာတ်ခွဲခန်းထုတ်ကုန်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရည်မှန်း, လေယာဉ်မှူးကစမ်းသပ်မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် Sberbank Group မှအဘို့အ blockchain-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့, တစ်ဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်.
က Igor Bulantsev အဆိုအရ, Sberbank ရဲ့အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, blockchain အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် “reshaping” ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းကိုဈေးကွက်, အဖြစ်ဘဏ်၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ.
Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဆိုပြုထား Blockchain အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ဥပဒေကြမ်း
Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တစ်ဦးကအမတ်ဥပဒေရေးရာအီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်းများအဖြစ် blockchain လက်မှတ်ပေါင်းအသိအမှတ်ပြုအသစ်တစ်ခုဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်, မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်ဥပဒေပြုအားထုတ်မှု marking.
အဆိုပါဥပဒေကြမ်း, ဇန်နဝါရီအပေါ်ပြည်နယ်ဥပဒေပြုအမတ်ဂျေဆန်ဝဲလ်တို့ကကိုယ်စားလှယ်များ၏ Tennessee ပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်မှတင်သွင်းခဲ့သည်. 10, ဖလော်ရီဒါနှင့် Nebraska အတွက်တင်သွင်းဥပဒေပြဌာန်းအလားတူအပိုင်းပိုင်းကိုပဲ့.
သို့သော်ဖလော်ရီဒါနှင့် Nebraska အတွက်အားထုတ်မှုနှင့်ဝသကဲ့သို့, အဆိုပါတိုင်းတာမှုများအငြင်းအခုန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကတဆင့်ရွှေ့အဖြစ်ကအခြားအမတ်များတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်ကြရမည်ဖြစ်နေဆဲ.
အွန်လိုင်းဘဏ် Swissquote ကြောင့် Bitcoin ကုန်သွယ်ဖို့ကယ့်အမြတ်အစွန်းအလားအလာတိုးလာ
အွန်လိုင်းဘဏ် Swissquote ၎င်း၏အမြတ်ငွေအလားအလာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော 2017, cryptocurrencies အတွက်ခိုင်မာတဲ့ကုန်သွယ်ကနေအကျိုးတော်မူပြီးမှ. အဆိုပါကုမ္ပဏီ Bitcoin ကုန်သွယ်များအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူပျံနေပါတယ်ထားပြီး.
gland-based Swissquote င်ငွေစုစုပေါင်းရှိသည်ဟုမျှော်လင့် 186 သန်းဆွစ်ဖရန်အတွက် 2018, 8 သန်းကသူ့ရဲ့လတ်တလောခန့်မှန်းချက်များတွင်ခန့်မှန်းခဲ့သည်ထက် ပို.. အဆိုပါဘဏ်အကြောင်းတစ် pretax အမြတ် post လိမ့်မယ်ဟုပြောသည် 45 သန်းပြင်သစ်, ယနေ့ဖြန့်ချိမယ့်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်.
ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးတက်မှုနှုန်းအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်နှစ်ခုအချက်များ၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်, Swissquote ကပြောပါတယ်.
ဖောက်သည်အာမခံနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုတွေနဲ့သိသိသာသာပိုပြီးကုန်သွယ်, ကုမ္ပဏီလည်း cryptocurrency ကုန်သွယ်၏နိဒါန်းအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းရနေချိန်တွင်.
Swissquote ဇူလိုင်လထိုသို့သောပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်ဖို့ကပထမဥရောပအွန်လိုင်းဘဏ်ခဲ့သည်, 2017.
ဂျပန်ရဲ့ DMM Group မှ Bitcoin လဲလှယ်လွှင့်တင်
DMM Group မှ, တစ်ဦးဂျပန်အခြေစိုက်အီးကောမတ်စနှင့်အင်တာနက်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီ DMM Bitcoin ကိုခေါ်အသစ်တစ်ခုကိုလဲလှယ်ဖွင့်နေသည်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီပူဇျောသက်ကာစီစဉ် 24/7 ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု, နှင့်လက်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Bitcoin လဲလှယ်ဂျပန်ဖြစ်ပါသည်.
ကုမ္ပဏီတရားဝင်တစ်ဦး '' ကို virtual ငွေကြေးကုန်သည်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်’ ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဗျူရိုထဲမှာ
၏အရေးအပါဆုံးဖြစ်ရပ်များ 2017 အဆိုပါ Crypto အဝန်းထဲမှာ
Bitcoin ရဲ့ချွန်ထက် ...
Previous Post:Bitcoin Hardforks ကဘာလဲ?
Next Post:Blockchain သတင်းများ 13 ဇန္နဝါရီလ 2018
ဇန္နဝါရီလ 21, 2018 admin
Experts from The Element Group analyzed last year’s Crypto-market and told about